warkii.com » Fashilkii Ku Dhacay Greenwood & Rashford, Wacdarihii Anthony Martial Iyo Qiimaynta Kulankii Leicester & Manchester United
Fashilkii Ku Dhacay Greenwood & Rashford, Wacdarihii Anthony Martial Iyo Qiimaynta Kulankii Leicester & Manchester United
Manchester United waxay kusoo xidhatay horyaalka Premier League ee xili ciyaareedka, iyadoo ku dhamaysatay kaalinta saddexaad kaddib markii ay 2-0 ku garaacday Leicester City oo halis ku gelisay King Power Stadium.
United ayaa u baahnayd guul ama barbarro, waxaanay heshay midka hore oo u xaqiijisay inay kaalinta saddexaad ku fadhiisato, halka Leicester ay ku dhamayasatay kaalinta shanaad oo ay ixli ciyaareedka dambe ka dheeli doonto Europa League.
Qaybtii hore ayaa ku adkayd labada kooxoodba oo aanay wax goolal ah kala helin, laakiin ciyaarta oo ay 19 daqiiqadood oo kali ahi ka hadhsan yihiin ayay Jonny Evans iyo Wes Morgan xerada ganaaxa dhulka ugu tuureen Anthony Martial, waxaana Red Devils loo dhigay rikoodhe uu gool u beddelay Bruno Fernandes.
Casaan la siiyey Evans markii uu qalad xun ku galay Scott McTominay ayaa Leicester niyad jab ku riday iyadoo ciyaartuna dhamaad kusii dhow, laakiin waxa qalbi jab kale u geystay Jesse Lingard oo daqiiqaddii 90+6 ka faa’iidaystay qalad xun oo uu sameeyey Kasper Schmeichel, waxaanu Red Devils u dhaliyey goolka labaad.
Anthony Martial oo lagu galay rikoodhaha goolka uu u beddelay Bruno Fernandes ayaa noqday xiddigii ugu wanaagsanaa garoonka, waxaanu helay darajo ka sarraysay dhamaan ciyaartoyda 22ka ah ee garoonka ku jiray.
Xiddiga reer France ayaa shaqo badan ka qabtay afka hore, waxaanu ahaa khatar ay waajahayeen difaaca Leicester, halka Mason Greenwood iyo Marcus Rashford aanay habeenkoodii ahayn oo ay heleen qiimayntii ugu liidatay ciyaartoyda Man United.
Martial ayaa qiimaynta ciyaarta ka helay darajada 8, mana jirin ciyaartoy kale oo kusoo dhowaaday, laakiin siddeed ciyaartoy oo Red Devils ah ayaa iyaguna bandhig wanaagsan muujiyey oo min 7 ka helay qiimaynta kulanka.
Labada ciyaartoy ee Rashford iyo Greenwood ayaa ugu liitay qiimaynta ciyaartoyda Man United, waxaanay heleen min 6.